Abakhiqizi Nabahlinzeki Bendwangu Yesikrini Selanga - I-China Sunscreen Fabric Factory
I-Outdoor Manual Zebra Sun Screen Roller Blind Sunscreen Blinds Fabrics
Ama-Zebra blinds aziwa nangokuthi ama-soft thread blinds, ama-rainbow blinds, ama-dimming roller blind, ama-double layer roller blind. Indwangu eboshiwe eyenziwe ngezicucu ezincane zendwangu kanye ne-gauze enobubanzi obulinganayo obuhlukanisiwe komunye nomunye, ihlelwe ngomkhawulo owodwa, kanti enye iphetho igoqwe nge-shaft ukulungisa ukukhanya.
Lapho i-gauze ne-gauze zihlangana, ukukhanya kuthambile, ngokwezinga elithile, kunciphisa ukukhanya okuqondile. Lapho indwangu kanye nendwangu kuphazamiseka, ukukhanya kuvinjelwe ngokuphelele, ukuze ekugcineni kufinyelele injongo yokuvimbela ukukhanya. Lapho izimpumputhe zidinga ukuvuleka ngokugcwele, izimpumputhe zingagoqwa ngokuphelele. Impumputhe yedube ihlanganisa ukufudumala kwendwangu, ubulula be-roller blind, kanye nomsebenzi wokufiphaza wezimpumputhe. Kulula ukusebenza futhi inamafomu ahlukahlukene we-shading ngaphandle kokuvimbela insimu yombono. Kuyisinqumo esihle sokuhlobisa ihhovisi nefasitela lasekhaya.
I-China Mechanism Ephrinte I-Sunshade Sunshine Fabrics ye-Roller Blinds
Indwangu eyimpumputhe ye-Sunscreen edumile
I-1.Indwangu ye-sunscreen ivimbela umlilo kanye nelangabi, izakhiwo zomphakathi ezinkulu nezakhiwo zamahhovisi ziyadingeka ukuze zihlangabezane nezindinganiso zikazwelonke zokuvikela umlilo. Njengamanje, ngokusho kwezidingo ezahlukene zokwakha, izindwangu zomthunzi ngokuvamile zisebenzisa izinga le-B1 le-flame retardant (inkomba ye-oxygen ≥32, izakhiwo ezijwayelekile ziyatholakala) kanye nezinga le-B2.
2.Usayizi uhlala njalo. Impahla yendwangu yokuvikela ilanga inquma ukuthi ayithambile, ngeke ikhubazeke, futhi igcine ukucaba kwayo.
Indwangu Eyimpumputhe Eyimpumputhe yaseShayina I-Windows Sun Shade Polyester Sunscreen Rolling Motorized Blind Fabric
Ukushesha kombala, inani elingu-PH
1. Ukushesha kombala
Nakuba kungekho bufakazi obanele bokufakazela ukuthi wonke amadayi asetshenziswa e-China polyester shade izindwangu ayingozi kubantu, kuqinisekile ukuthi ukuqinisa ukushesha kombala wezindwangu eziyimpumputhe ezidayiwe kunganciphisa ukulimala okungenzeka.
Ngakho-ke, kuyadingeka futhi ukunaka ukushesha kombala kwezindwangu zaseChina ze-sunshade.
Ukuphrinta I-Blackout Zebra Day and Night Rainbow Duo Blinds Fabric
Indwangu eyimpumputhe ye-formaldehyde yamadube roller
Kudlule okuqukethwe kwe-Formaldehyde, Ngaphandle kwe-formaldehyde ku-MagicalTex Sunscreen Fabric.
Ngokokuhlolwa kwe-SGS formaldehyde okuvela eceleni, ngaphandle kwe-formaldehyde kwenza iMagicalTex Sunscreen Fabric idlule iningi labaqhudelana nabo, ikhombisa impilo ephakeme kunabantu nendawo.
2015 Uphumelele ukuhlolwa kokuqukethwe okuholayo
Ngokwezinga lokuhlola okuqukethwe okuphambili kwase-US: 16CFR1303, Okuqukethwe Okuholayo kufanele kube ngaphansi kuka-600PPM, futhi enkampanini yase-US Walmart, banendinganiso ephakeme nakakhulu yemikhiqizo ehlobene Nezingane nezingane, idinga ukuthi okuqukethwe Okuholayo kufanele kube ngaphansi kuka-90PPM. Indwangu ye-MagicTex Sunscreen iqukethe kuphela ngaphansi kuka-100PPM
Indwangu Emhlophe Ephindwe Kabili Ye-Roller Yendwangu Idube Umthunzi Ama-Blinds Shades
I-China Roller Blind Fabrics
Emindenini, amakhethini angasetshenziselwa umthunzi, avikele ubumfihlo, kodwa futhi ahlobise amakhaya abo. Kodwa-ke, amakhethini amaningi amasha aqukethe i-formaldehyde. Ngemuva kokuthi amakhethini amasha athengiwe ekhaya, awakwazi ukulengiswa ngokuxhamazela. Ezinye izinyathelo zidinga ukuthathwa ukuze kuncishiswe izinsalela ze-formaldehyde emakhethini ngaphambi kokuba zisetshenziswe ngokuphepha. Ake Groupeve ukuchaza indlela yokuqeda i-methanol!
Ikhwalithi Enhle I-Blackout Zebra Window Roller Blinds ne-Shades Polyester Sunscreen Fabric
Indwangu eyi-UV kanye ne-Waterproof Roller Blind
Indwangu ye-Zebra inogqinsi olukabili, ingalungisa ukugudluka kokukhanya kwendawo futhi ayithathi isikhala. Umbala ugcwele futhi umsulwa, umbala wezindwangu zekhwalithi ephezulu unezithelo futhi uyathandeka, unebanga eliphakeme lokushesha kombala futhi awuzweli elangeni, akulula ukufiphala.
Indwangu yekhwalithi ephezulu inesicaba esihle, futhi akukho nkomishi egobayo noma igagasi kuyo yonke isiqondiso sobubanzi.
Ikhwalithi Enhle ye-PVC Ehlanganiswe I-Polyester ye-Rainbow Curtains Indwangu Eyizingqimba Ezimbili Zebra Blind Sunshade Fabric
Ngokusetshenziswa okubanzi kwezindwangu zomthunzi, abantu banezidingo ezehlukene zomuntu siqu zendwangu ehlanganiswe ne-PVC yomthunzi, phakathi kwayo amakhethini e-rainbow sunshade nendwangu yokungena kwamanzi nayo iyathandwa.
Ikhwalithi Ephakeme Intengo Eshibhile I-Fire Retardant Zebra Blinds
Imisebenzi yendwangu ye-zebra blinds
Lapho i-gauze ne-gauze kunqwabelana, ukukhanya kuthambile, okunganciphisa ukukhanya okuqondile ngokwezinga elithile. Lapho ikhethini nekhethini linyakaziswa, ukukhanya kuvinjwe ngokuphelele, ukuze ekugcineni kufezwe injongo yokuvimbela ukukhanya. Kukhona izitayela eziningi ze-zebra blinds, futhi izitayela ezahlukene zizoba nemisebenzi ehlukene. Ezimweni eziningi, lezi zitayela zihlukaniswa ngokwendwangu esetshenzisiwe.
Izindwangu zamakhethini e-Zebra ngokuvamile ziyi-polyester, i-hemp ne-nylon. Ngokwemiphumela ehlukene ye-shading yezindwangu, zingahlukaniswa ngamakhethini e-zebra angama-semi-shading, amakhethini e-zebra afana nelineni kanye namakhethini agcwele ama-zebra shading. Umphumela wokufiphaza ukusuka phansi ukuya phezulu.
Ikhwalithi Ephakeme Yokuphrinta I-Butterfly Jacquard Sunscreen Zebra Roller Blinds Fabrics
Ukunethezeka kwabantu endaweni yasendlini kuhlobene nezici eziningi, futhi izinga lokushisa eliphakathi nendawo elizungezile liyipharamitha ebalulekile.
Ehlobo, imisebe yelanga eqondile ingena ekamelweni ngokusebenzisa ingilazi izobangela ukushisa kwemisebe endaweni eqinile yekamelo eduze kwefasitela ukwandisa kakhulu, ukunikeza abantu umuzwa wokubhaka.
Ebusika, iwindi lengilazi elinezinga lokushisa eliphansi kakhulu linikeza umuzwa wemisebe ebandayo. Ngaso leso sikhathi, ukuhanjiswa komoya obandayo okubangelwa wumoya obandayo ocwila eduze kwefasitela nakho kuletha umuzwa wokuphefumula komoya obandayo kubantu abaseduze nefasitela, okunciphisa kakhulu ukunethezeka kwabantu.
Ikhaya DEC Blackout Motorized Zebra Roller Shutter Shade Window Roller Blinds Fabric
Umbala we-sunscreen zebra blinds fabric akumele uhlangabezane nezidingo zomhlobiso wezakhiwo, kodwa futhi unake ukubonakaliswa kokukhanya kwelanga.
(1) Uma isetshenziswa ngaphandle, izindwangu ezimnyama zinamandla anamandla okuvimba ukushisa okukhazimulayo kwelanga kunezindwangu ezinombala okhanyayo ngoba azidingi ukucabangela umbala omnyama wendwangu; uma isetshenziswa endlini, izindwangu ezinombala okhanyayo zingabonisa kangcono.
Ikhaya DEC I-Double Motorized Zebra Roller Window Blinds Shade Fabric
Uma sifika endaweni eyinqaba, into yokuqala esihehayo ukuhlobisa. Ukuhlobisa okuhle kungasinika umuzwa omusha. Iphephadonga eliyingqayizivele, elinokukhethwa okuhle kwamakhethini, ngokuvamile lingaletha ukunambitheka okuhlukile ekuphileni. Namuhla, sizokwethula isimiso esiyisisekelo sokufanisa iphepha lodonga namakhethini kuwe lapho sikhetha ikhethini. Masilungiselele ukumangala kwephupho elimangalisayo empilweni yethu.
Izimpumputhe Zezimoto Zisebenzisa Indwangu ye-Double Roller Zebra Solar Blind Shades Shades
izimpumputhe zidlala indima ebalulekile ekulungiseni umbala nokudala umoya emhlobiso wasekhaya. Kudingeka ukunakwa okwengeziwe nangokwengeziwe ekuhlobiseni. Nokho, akulula kangako ukwaneliseka ngomhlobiso. Khona-ke indlela yokufanisa i-curtain splicing?
Uma kuqhathaniswa namakhethini ombala oqinile wendabuko, amakhethini e-splicing angaphezulu ngokocansi. Ungakhetha izinto ezifanele kanye nemibala ngokuya ngesitayela sokuhlobisa ikhaya jikelele kanye nezintandokazi zomuntu siqu, futhi wenze indawo eyisidina isebenze. Manje sizokukhombisa ukuthi ungafanisa kanjani imibala kangcono!